बेलैमा सोच्दा राम्रो
वास्तवमा नेपाली कांग्रेस भन्ने राजनीतिक दलको आफ्नोभन्ने केही पनि छैन । त्यसो त मुलुकको सबैभनदा पुरानो राजनीतिक दल, जसले राणा, पञ्चायतका विरुद्धमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो भने जनआन्दोलनमा निरंकूशताविरुद्ध सशक्त रुपमा सहभागी भएको हो । त्यस्तो रानजीतिक दलको आज आफ्नो केही पनि छैन भनेर भन्नुपर्दा वास्तवमा उदेक लाग्छ । तर सत्य यह िहो ।
आफ्नो जन्मजात नीति र सिद्धान्त अनि धर्मलाई त्यागेर कांग्रेसले जनआन्दोलमा नै आफूलाई समाप्त पारेको हो । भन्नु नै पर्दा अहिले कांग्रेससँग आफ्नो भन्ने केही पनि छैन । हुँदा हुँदा सिद्धान्त बाहेक नीति र कार्यक्रमसमेत वामपन्थीहरुबाट सापटी लिएर काम चलाइरहेको छ कांग्रेसले । अघि मनमोहन अधिकारी प्रधानम्न्बी अनि भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको सामजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अन्तर्गतको बृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता अनि विभिन्न रोगहरुमा दिइने भत्ताहरुमा रकम बृद्धि गरेर जुंगामा ताउ दिइरहेको छ कांग्रेसले ।
हिजो यो भत्ता कार्यक्रम सुरु गर्दाकांग्रेसी नै विरोध गर्दछ, मुलुकले यो भार थाम्न सक्दैन भनेर आज त्यही कार्यक्रममा रकम बृद्धि गरिदिएर पाँचवर्षपछि आउने चुनावमा बहुमत ल्याउने सपना देख्न थालेको कांग्रेसले । कठै कांग्रेसको दयनीयपन । एउटा नयाँ कार्यक्रमको सोचसमेत नभएको । यो सब देखेर विश्लेषकहरु भन्छन्– कांग्रेस सकिन समय लाग्ला तर कांग्रेसले केही गर्लाजस्तो छैन । कग्रेस पुरानै रहलपहलमा भए पनि केही वर्ष बाँच्छ, कांग्रेसीहरु पनि दुईटा वामपन्थीहरु एमाले रम ाओवादी केन्द्रका वीचमा आफूलाइृ शुद्ध प्रजातन्त्रवादी भनेरै पनि कांग्रेसले केही वर्ष आफूलाई बचाउला ।
भर्खरै सम्पन्न चुनावहरुमा पत्तासाफ भए पनि आउँदो चुनाव, जुन पाँचवर्षपछि हुनेछ, मा खुट्टा तन्काउन पक्कै पनि प्रयास गर्नेछ कांग्रेसले । हिजो वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसादहरुको नामले बिक्थ्यो कांग्रेस, नेपालको राजनीतिमा । आज...? जब गिरिजाले कांग्रेसलाई वामपन्थीहरुको बाटोमा खासगरी, माओवादीको लाइनमा अर्थात गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि आयातित संघीयतामा होमे तवदेखि कांग्रेसको दुर्लिन सुरु भयो र कांग्रेसको यो दयनीय अवस्था त्यसैको प्रतिफल हो ।
आज के भइरहेको छ कांग्रेसभित्र ? अनुशासनहीनहरुको जमात बुर्कुसी मारिरहेको छ । पार्टीभित्र भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति मौलाएको छ । गूट त हिजो पनि थियो, आज झन बढी गुटबाजी चलिरहेको छ । पार्टी सभापतिका ेनियन्त्रणमा देखिदैन, कांग्रेस कार्यसमितिसमेत हाँस न कुखुराको चालमा देखिन्छ । कार्यकर्ताहरु नेपाली कांग्रेसको नभएर शेरबहादुर दाईको, रामचन्द्य्र दाइको, सिटौलाजीको, सशांकको, खुमबहादुर खड्काको, अरु ससाना व्यक्तिपिच्छेका बनेका छन् । अझ शेखर, सुजाता, सशांक आदि कोइरालाहरुको त छुट्टै झुण्ड छ कांग्रेसमा ।
प्रत्येक चुनावमा अरु राजनीतिक दलहरु भन्दा बढी कांग्रेसभित्र अन्तरघातीहरु भेटिन्छन् । हिजो बुढा नेताहरु बाँचुन्जेल अलिकति भए पनि कार्यकर्ताहरु अनुशासनमा थिए । आज, पार्टी सभापति र उनकी धर्मपत्नीको नै अनेक काण्डहरुमा नाम मुछिएपछि तलका कार्यकर्ताहरुले किन पो मौका छोड्थे र ? किन पो टेर्थे र ? अव घरको मूली ठिक भए पो अरु सदस्यहरु पनि ठिक हुन्थे । टिकट वितरणदेखि नियुक्तीसम्ममा सभापति, प्रधानमन्त्री र उनकी पत्नीकोनाम मुछिन्छ भने, अरुले औंला उठाने नै भए । त्यसो त कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचार अहिले मात्र भएको होइन, ०४६ साल पछिको कुरा गर्दा सर्वमान्य नेताका परिवाको, गिरिजा सुजाता, नोनाहरुको, रामशरणको, खुमबहादु, जेपी गुप्ता, विजय गच्छदार, गोविन्दराज जोहीहरुको पनि ठूला ठूला काण्डमा नाम जोडिएको मात्रै होइन, यी मध्ये केही जेल भित्रै बसेर सजाय पाइसकेका हुन् । तर आज जे भइरहेको छ, त्यो त कहालीलाग्दो छ भन्छन् कांग्रेसीहरु नै । संस्थानका जीएमहरु, राजदूतहरु, नियुक्त गर्दा मात्रै होइन, आप्नै पाटीृकाहरुसँगसमेत चुनावमा टिकट दिलाइदिने शर्तमा पैसा उठाइएको छ । तयत्तिको त पैले कहिले भएकै थिएन । पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार छ । सिद्धान्त अरुको, कार्यक्रम अरुको, अव त्यसमाथि पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार । के होला त यो पार्टीको हालत ?
कांग्रेसलाई फेरिउठाउने हो भने अव शुद्धिकरणको अभियान सुरु गरिहाल्नुपर्छ । र, त्यो माथिबाटै गर्नुपर्छ । फेरि भ्रष्टको मात्रै किन ? विदेशी दबाब र प्रभावमा परेर पार्टीलाई वामपन्थीको विछलग्गू बनाउनेहरुको पनि हिसाव किताव हुनपर्छ भन्छन् युवा कांग्रेसीहरु । एकजना कांग्रेसीका अनुसार राजाको रिसमा नेपाली कांग्रेसलार्इृ भड्खालामा हालियो । धर्मनिरपेक्षता भनेर कृश्चियनलाई स्वीकारियो । अनि संघीयता भनेर मुलुकलाइृ टुक्रा पार्न खोजियो । कांग्रेस नेतृत्वले गर्नुसम्म गल्ती गरेका छन्, माथिदेखि तलसम्म शुद्धिकरण हुनु जरुरी छ ।
प्रजातन्त्र बलियो पार्ने र कम्युनिष्टकरणबाट देशलाई बचाउने हो भने कांग्रेस पुरानै लयमा फर्किनुपर्छ । तवमात्र जनताले पार्टीलाई स्वीकार्ने छन् । अन्यथा आज विपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको कांग्रेस, यही गतिमा जाने हो भने पाँच वर्षपछि राप्रपा, राजमो परिणत हुनेछ । तसर्थ, कांग्रेसलाई अहिले कब्जा गरेर बसेकाहरुले बेलैमा सोचुन् । पार्टीलाई सिद्धान्तमा फर्काएर उँभो लगाउने
कि ? वामपन्थीहरुको पछि लागेर अझ तल झर्ने ? सोच्ने काम कांग्रेसका विचारकहरुको ।